လူ နွား မြက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » လူ နွား မြက်
လူ နွား မြက်
Posted by naywoon ni on Apr 1, 2013 in Poetry |9comments
လူ နွား မြက် (လူ တိရိစ္ဆာန် အပင်)
သဟဇာတ ဖြစ်စေဖို့ ဖန်တီးနေလေ့ရှိတယ် …….။
ဘာစရာမှ မရှိ လူတွေချည့် လှုပ်လှုပ်ရွရွ
ပုပု ကွကွ လှုပ်ရှား
လူသားတွေ ဘာအလုပ်ဖြစ်လာလိမ့်မလဲ …။
ဒါမှ လူနွားမြက် ဂေဟ စနစ်နဲ့
ကမ္ဘာမြေ သက်တမ်းပြည့် နေနိုင်လိမ့်မယ်….။
ဟိုဘက် နွား Post မှာ
ဦးဇင်းကြောင် က လူဆိုတာ ဆုံလည်နွား လိုဘဲ သံသရာက မလွတ်သ၍ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မတဲ့။ လို့ ဟောထားတယ်။
လူကလဲ နွားဖြစ်နိုင်တဲ့ သဘောပေါ့။
နွားကတော့ မြက် မဖြစ်နိုင်ဘူး မဟုတ်လား။
နွားစားထားတဲ့.. မြက်သီးတွေက.. မြေပေါ်ကျရင်.. မြက်ပြန်ပေါက်တယ်လေ..
တကယ်တန်း အနုစိတ်ခွဲရင်.. သက်ရှိ..သက်မဲ့.. အရာဝတ္တုတွေက.. ကယ်မစ်ကယ်ကွန်ပေါင်းအစုအဝေးတွေပါ..
ဟိုလူထဲ…ဟိုသတ္တ၀ါထဲ..ဟိုအရာဝတ္တုထဲ..နည်းနည်းဆီမျှပါပြီး ..ဂေဟစနစ်လည်တာမို့.. ဘ၀သံသရာလို့.. ရှေးက.. သိပ္ပံနားမလည်ခင်.. ပြောခဲ့ကြတာဖြစ်မယ်..။ :harr:
အကုသိုလ် အတုံးအခဲဂျီးဘဲ …
အောင်မာ ဒါတောင် ပေါလိုက်သေးတယ်
ဘာမန့်ရမှန်း မသိတာနဲ့ …
အင်းးး အဲ .. ဘိုကြောရမဲ …
ဂလိုဘဲ မန့်ခဲ့ဒယ်ပေါ့ဂျာ ….
မကျေနပ်ရင်လည်း မျှတသွားအောင် ကျုပ်ကို လာသတ်လှည့်ဗျာ …
စွမ်းအင်တည်ဲမြဲ မှု နိယာမသဘော တွေ အရပေါ့
လူတွေ များလာတော့ မြက်တွေ။ နွားတွေ များလာအောင်
မရတော့ဘူးဆိုတော့ …. ကိုယ် အတတ်နိုင်ဆုံး မပါအောင်(သတ်ဖြတ်ကြထဲ) ကြိုးစားကြတာပေါ့
ဟိုတစ်ဘက်မှာ နွားကို ဇာတ်လိုက်ထားပြီးငြင်းခုံနေကြတာတွေ့လို့ ကြားထဲက ကိုယ်တွေးမိတာလေးချရေးလိုက်မိတာပါ….။ သံသရာ လည်တယ်ဆိုတာကို ထည့်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့စကားလုံးလိုပဲ ဆုံးမှာမဟုတ်ပေးဘူး …..။
သူကြီးပြောသလို နွားတဲ့မြက်သီး ဆိုတာထက် နွားက အပင်စုံစားရတာဆိုတော့ အသီး(အစေ့)လည်းစုံပါတယ်…။ အဘမြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမှာ မိုးခေါင်နေတော့ နွားစာက သီးသန့် မကျွေးနိုင်ကြရှာပါဘူး …..။ ကုက္ကိုရွက်တောင် ခုတ်ကျွေးကြရတာဆိုတော့ နွားအီးအီးက မြက်တင်မဟုတ် ကုက္ကိုပင်တောင်ပေါက်လာနိုင်သေးတယ်….။
@ အံဇာရေ အကြောင်းမရှိပဲနဲ့တော့ လာသတ်လို့မရပါဘူးကွာ …။ လူလူချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် လူက တိရိစ္ဆာန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တိရစ္ဆာန်က လူကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တိရစ္ဆာန် အချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းညီညွတ်မှ သတ်လို့ရတာပါ….။ ဘယ်လောက်ပဲ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားဆောင်ပေါ်မှာ ပင့်ကူအိမ်လာဖွဲ့ရင် ဖယ်ရှားပစ်ကြတာပဲ….။ သူ့အိမ်ယာ ဖျက်စီးမိပါလားလို့ တွေးမိတဲ့သူရှားပါတယ်…။ အဲဒိလို ပင့်ကူအိမ်ကိုဖယ်ရှင်းရင်းနဲ့ ပင့်ကူလေးလည်းသေသွားနိုင်တာပဲ…။ အဲဒါကို ဘုရားကိုကြည်ညိုဖို့ သပ္ပယ်အောင် ရှင်းတယ် ဒေါသစိတ်မပါဘူး ဘာညာ ဘာညာ သာရကာ လျှောက်ပြောနေလည်း သူ့တစ်ပါးအိမ်ယာဖျက်စီးတာပါပဲ…။ အကောင်လေးသေသွားရင် သူ့အသက်သတ်တာပါပဲ…။ ဒီလိုပဲ မြွေကဖားကိုစားတယ် သူ့အစာအတွက် လူက မြွေကိုသတ်တယ် စားချင်မှလည်းစားမယ် အန္တာရာယ်ဖြစ်မှာမို့ အဆိပ်ရှိတဲ့သတ္တ၀ါ ကိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အကြောင်းပြလို့သတ်တယ်…။ နွားသားစားနေကျမို့ ထပ်စားချင်လို့သတ်တယ်လေ…။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး …။ ဒါလေးကိုလည်းပြောချင်လို့ပါ….။ ဒို့ဗမာစကားရှိတယ်မဟုတ်လား အရူးအမဲသားကျွေးသလိုဆိုတာ ….။ နွားမြင်တိုင်းလက်ညိုးထိုးပြတယ်ဆိုတာ ….။ အဲဒိစကားအသွားအလာကောက်ကြည့်လိုက်ရင်း ရှေးဗမာကြီးတွေမှာ အမဲသားစားတာကိုအားပေးတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်နော် …..။
kthwinzayarmyo ရေ ခုနှစ်တွေမှာ တို့မြန်မာပြည်က အသက်ကြီးတဲ့သူရာနှုန်းနဲနေသေးလို့ရယ် အသက်ကြီးတဲ့သူရာနှုန်းများလာရင်တော့ နို့စားနွားတွေများမှကိုက်မယ်နဲ့တူရဲ့ ….။ ဘာတဲ့ 40 ပြည့်ရင် အမိနို့သက်ကုန်တယ်ဆိုတာ ….။ ဒါကြောင့် 40 မှ ဘ၀ စတယ်လို့ပြောတာထင်ရဲ့….။
ကိုကြောင်ကြီးရေ…..။ ကျနော်ကတော့ အမဲသားထက် ၀က်သားကိုပိုကြိုက်ပါတယ်….။ ချက်ရလွယ်သလို စားတော့လည်းသွားကြားမညှပ်ဘူး ….။ သိပ်လည်းအားစိုက်ပြီးဝါးစရာမလိုဘူးလေ…..။ ကျနော့် အထင်က အမဲသားက ပိုပြီးအနံ့ပြင်းတယ်ထင်ရဲ့….။ အမဲစားစားပြီးရင် ပါးစပ်ထဲကအနံ့ကတော်တော်နဲ့မပျောက်ဖူးဗျ….။ ရှောင်တာမဟုတ်ပေမဲ့ အမဲသားတော့စားခဲပါတယ်…။ ဘာမှစားစရာမရှိတော့လည်း ကြိတ်ဝါးရတာပေါ့ဗျာ ဟုတ်ဘူးလား ….။
၄ ရယ် ၇ ရယ် ၅ ရယ်
လူ နွား မြက် ပိုစ့်ဆိုတော့ အဲဒီသုံခုလုံးပါအောင် မန်မယ်ဗျာ။
နွားက မြက်စားပြီး အားရှိတယ်။
လူက မြက်စားတဲ့ အမဲသား(နွား၏အသား)စားပြီး အားရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် လူက မြက်ကို တိုက်ရိုက်စားရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ။
သူနေရာနဲ့သူ ဖြစ်တည်နေခြင်းက အကျိုးရှိပေ၏ပေါ့လေ။
.အခု…. ဂေဟစနစ်ကြီး နေမကောင်းဘူး…တဲ့…
.ဆေမှားကြီး မိခဲ့တာ ဆိုပါတော့…